2 Korintofo 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nea Ɛto So Abien A Ɔde Kɔmaa Korintofo 7:1-16
Momma yɛnhohoro yɛn ho mfi efĩ ho (1)
Paul de Korintofo no hoahoaa ne ho (2-4)
Tito de amanneɛbɔ a ɛyɛ dɛ bae (5-7)
Awerɛhow a Onyankopɔn pɛ; adwensakra (8-16)
7 Adɔfo, esiane sɛ yɛwɔ bɔhyɛ ahorow yi+ nti, momma yɛnhohoro yɛn ho mfi ɔhonam ne honhom mu fĩ nyinaa ho,+ na yɛn ahotew adi mu wɔ Onyankopɔn suro mu. 2 Mummue mo komam mma yɛn.+ Yɛnyɛɛ obiara bɔne, yɛnsɛee obiara, yɛmpɛɛ obiara ho mfaso.*+ 3 Ɛnyɛ sɛ mereka eyi de abu mo fɔ. Efisɛ maka dedaw sɛ moda yɛn koma so, na yɛne mo bewu na yɛne mo atena nkwa mu. 4 Mitumi de ahotoso kɛse ne mo kasa. Mede mo hoahoa me ho pii. Awerɛkyekye ahyɛ me ma; m’anigye aboro so wɔ yɛn amanehunu nyinaa mu.+ 5 Nokwasɛm ne sɛ, bere a yɛbaa Makedonia no,+ yɛn nipadua* anhome, na mmom yɛkɔɔ so huu amane wɔ akwan nyinaa mu; ná ntɔkwaw atwa yɛn ho ahyia, ɛnna ehu nso wɔ yɛn mu. 6 Nanso Onyankopɔn a ɔkyekye wɔn a wɔayɛ mmɔbɔ* werɛ+ no, ɔnam ba a Tito bae no so kyekyee yɛn werɛ. 7 Nso ɛnyɛ ba a ɔbae no nko ara na ɛkyekyee yɛn werɛ, na mmom awerɛkyekye a mo nti onyae no nso ntia, efisɛ ɔbɛka kyerɛɛ yɛn sɛ mo ani agyina me,* mo werɛ ahow yiye, na mudwen me ho paa. Ɛno nti, m’ani gye boroo so. 8 Na sɛ me krataa no maa mo werɛ howee mpo a,+ minnuu me ho. Sɛ mfiase no minuu me ho mpo a (efisɛ krataa no maa mo werɛ howee, ɛwom sɛ na ɛyɛ bere tiaa bi), 9 seesei de, m’ani agye. Ɛnyɛ mo werɛ a ɛhowee kɛkɛ no ntia, na mmom adwensakra a mo awerɛhow no ma munyae no ntia. Efisɛ awerɛhow a mudii no, ɛyɛ nea Onyankopɔn pɛ, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nti asɛmmɔne biara rento mo. 10 Sɛ obi di awerɛhow sɛnea Onyankopɔn pɛ a, ɛma ɔsakra n’adwene nya nkwa,+ na ɛnyɛ ne yaw sɛ ɔsakraa n’adwene. Na sɛ obi di awerɛhow sɛnea nnipa a wɔwɔ wiase yɛ no a, ɛde owu na ɛba. 11 Mo werɛ a ɛhowee sɛnea Onyankopɔn pɛ no nti, hwɛ sɛnea mokekaa mo ho. Eyii asodi fii mo so, ɛde abufuw bae, ɛde ehu bae, ɛde anigyina bae, ɛde nsiyɛ bae, na esiesiee mfomso!+ Akwan nyinaa mu, modaa mo ho adi sɛ mo ho tew* asɛm yi mu. 12 Ɛwom sɛ mekyerɛw mo de, nanso ɛnyɛ nea ɔyɛɛ bɔne no+ anaa nea wɔyɛɛ no bɔne no nti na mekyerɛwee, na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a mmɔden a mobɔ wɔ yɛn ho no bɛda adi wɔ mo mu wɔ Onyankopɔn anim. 13 Eyi nti na yɛn werɛ akyekye no. Yɛde awerɛkyekye a yenyae no to nkyɛn a, nea ɛmaa yɛn ani gye boroo so koraa ne Tito anigye no, efisɛ mo nyinaa maa ne koma tɔɔ ne yam.* 14 Na sɛ mede mo hoahoaa me ho kyerɛɛ no a, m’ani anwu, efisɛ sɛnea nsɛm a yɛka kyerɛɛ mo nyinaa yɛ nokware no, saa ara na hoa a yɛde mo hoahoaa yɛn ho wɔ Tito anim no nso ayɛ nokware. 15 Bio nso, sɛ ɔkae osetie a mo nyinaa yɛe,+ ne sɛnea mode osuro ne ahopopo gyee no no a, ɛma ɔdɔ a ɔwɔ ma mo no yɛ kɛse. 16 M’ani agye, efisɛ ade nyinaa mu mewɔ mo mu awerɛhyem.*
^ Anaa “yennidii obiara ho.”
^ Nt., “honam.”
^ Anaa “wɔabotow.”
^ Nt., “mobɔ me ho mmɔden.”
^ Anaa “mo abrabɔ ho tew; asɛm biara nni mo ho.”
^ Nt., “ne honhom ho dwoo no.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “mo nti mewɔ akokoduru.”
2 Korintofo 7